Atsaharo ny tsimatimanota, alalaho ny fanehoankevitra! · Global Voices teny Malagasy
Maherin'ny arivo ireo mpanaogazety maty nanomboka tamin'ny 2006, hoy ny UNESCO.
Voadika ny 17 Novambra 2019 18:30 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, srpski, Shqip, বাংলা, Español, Ελληνικά, English
Ity op-ed ity dia nosoratan'i Annie Game, Lehibe Mpanatanteraka ao amin'ny IFEX, ilay tambajotra maneran-tany mampiroborobo sy miaro ny fahalalahana haneho hevitra sy hahazo vaovao. Averina avoaka izy io anatin'ny fifanarahana fiarahamientana eo amin'ny Global Voices sy ny IFEX. Teto no nivoahan'ity lahatsoratra ity voalohany.
Amin'ny endriny maro samihafa no isehoan'ireo fandrahonana atao amin'ny fampahalalambaovao, miainga amin'ny fanafihana ireo mpanao gazety, hatrany amin'ny fanaovana fanahy iniana ny filazana vaovao diso, sy ny fanakatsakanana ireo gazety, ary midadasika be ny vokatr'izany: manakana ireo olona tsy handray izay vaovao ilainy mba hamahàna ireo olana misy lanjany aminy, manamafy ny fibodoana ara-politika, ary mandrava ny demokrasia.
Tamin'ny volana lasa teo, olona teo amin'ny 6 tapitrisa teo no nidina an-dalambe ho valin'ny krizin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Namporisika olona maro hafa ny fahaiza-mamorona hita tanatin'ilay hetsi-panoherana nataony raha iny zareo nandeha iny; fanehoankevitra mihetsika, nankaherezin'ny zavanisy. Niangavy antsika “hihaino ireo siantifika” i Greta Thurnberg, ilay Soedoazy mpikatroka mafana fo ho an'ny toetrandro. Saingy ahoana raha toa ka ampanginina amin'ny fomba mivantana na ankolana ireo feo ilaintsika henoina?
Nanambara ny fandalinana feno iray navoaka ny volana Aogositra 2019 fa nitombo avo roa heny ny famonoana ireo mpikatroka mafana fo ho an'ny tontolo iainana tanatin'ny 15 taona lasa. Tanatin'ny 90% tamin'ireo tranga ireo, tsy nisy olona voaheloka – haavonà tsimatimanota mampivarahontsana.
Fampahatsiahivana mahatonga saina ilay lisitry ny UNESCO mirakitra ireo mpanaogazety novonoina naneran-tany — maherin'ny arivo nanomboka tamin'ny 2006. Nitombo ihany koa ny tahàn'ireo vehivavy lasibatra, ireo vehivavy mpanao gazety ireo izay miatrika fanafihana tsy mitsaha-mitombo, mifantoka amin'ny maha-vehivavy azy.
Tao anatin'ny 12 volana lasa, hitantsika nivoaka ihany ny marina tany Gambia mikasika ilay famonoana ny mpanaogazety Deyda Hydara tamin'ny 2004; didim-pitsaràna manan-tantara navoakan'ny Fitsaràna Iraisan'ny Amerikana ho an'ny Zon'olombelona izay niampanga ny governemantan'i Kolombia ho tompon'andraikitra tamin'ny famonoana an'i Nelson Carvajal Carvajal tamin'ny 1998; ary ny fanapahankevitra ara-tantara noraisin'ny Vaomiera Iraisan'ny Amerikana hampiakatra anoloan'ny fitsaràna ilay trangàna fanafihana mahery setra tamin'ny volana Mey 2000 izay saika nahafaty ny mpanaogazety mpanadihady, Jineth Bedoya Lima.
Azia Afovoany sy Kaokazy 7 andro izay